Baraatu Bara Milkiitii Bahaa Falmadhaa! – Welcome to bilisummaa
Baraatu Bara Milkiitii Bahaa Falmadhaa!
Jiituu Lammii, Sadaasa 4, 2014
Ebla 2001, sochiin Walabummaa Barnootaa (Academic Freedom) qabatee Yunbarsiitii Finfinnee keessatti ka’e tarsiimoo dhokataa oogganni barattoota Oromoo guutummaa barattoota biyyattii warraaqsu itti fayyadame ta’uun bal’inaan kan hubatame bubbultii booda ture. Sochiin gaaffilee bu’uraa (Freedom of free speech, the right to assembly, Removal of armed police from the campus)qabachuun eegale Fincila jabaa kaasee guutummaa Finfinnee dhuunfachuun hanga masaraa Wayyanee raasutti furga’e. Warraaqsa kanaan Yunbarsiitiin Finfinnee waggaa tokkoof cufamuuf dirqame. Kuni taateewwan seenaa qabsoon Oromoo gama hundaan olaantummaa qabaachaa deemuu eeran keessaa tokko.
Amma gama lachaniinuu qabsoon jabaataa deeme. Barattoonni Oromoo golli diddaa gabrummaa bal’atee bu’uura hawaasaa akka dhuunfatu balbala dabalataa saaqan. ‘Oromoo Youth League’ijaaramuu odeessi eeru dhagahamuun Wayyaanee biratti rifaasuu dabale. Otoo xinnoo hin turin ‘Liigii Dargaggoo’ jechuun bakka hundatti waajjira saaqanii dargaggoota hawachuuf carraaqqii eegalan wayyaanotni. Kun waldhaansoon gama lamaaniinuu deemu jajjabaachaa deemuuf mirkana.
Tags Jiituu Oromia
Previous Seerri barreeffama Afaan Oromoo biyya keessaa fi alatti daandii garaagarummaa calaqqisu lama qabatee dagaagaa jiraachuu
Next Beeksisa Waamicha Walgahii Amajjii Guyya WBO Amajjii Guyya 3/01/2015 Ilmaan Oromoo biyya Swedin magaalaa skara fi Naannoo isii jiraattanif kuta Skandinivia Jiru hundaaf Waamicha walgahii konyaan ABO ayyantu Dagaa kabajaan afeera,